2021 Juni Alibaba Online Tradeshow Liveshow Schedule
Usuku: 15: 00pm, Juni 17 CST 1. Ukwethulwa kwenduduzo yokuphefumula umoya omusha opholile 2. Isingeniso nokusetshenziswa kwegumbi elilodwa le-ERV 3. Ukulawulwa kwe-WIFI uchungechunge lwe-ERV + test ye-UVC d ...
Uhlelo lwe-2021 Alibaba Live Broadcast
Isikhathi Esibukhoma Okuqukethwe Okumaphakathi Kubamba i-QR Code bukhoma ku-Alibaba 14:00 pm, Mashi 4 (CST) i-Eco Vent Pro Plus Energy Saving Ventilation nePPE Products Production Cleanroom Service uTom, Andrew https: //activity.ali ...
Buhle nobubi: Modular vs Traditional Cleanroom Walls
Uma kukhulunywa ngokuklama igumbi lokuhlanza elisha, isinqumo esikhulu kunazo zonke, futhi mhlawumbe nesokuqala okufanele usenze ukuthi ngabe igumbi lakho lokuhlanza lizoba nge-modular noma ngokwakhiwa ngokwesiko. Kukhona izinzuzo nemikhawulo kokukodwa kwalokhu okukhethwa kukho, futhi kungaba nzima ukunquma ...
Ingabe izinto zokuhlanza umoya ziyasebenza ngempela?
Mhlawumbe une-allergies. Mhlawumbe uthole izaziso zokucindezela eziningi kakhulu mayelana nekhwalithi yomoya endaweni yangakini. Mhlawumbe uzwile ukuthi kungasiza ukuvimbela ukusabalala kwe-COVID-19. Noma ngabe yisiphi isizathu sakho, ucabanga ukuthola okokuhlanza umoya, kepha ekujuleni kwenhliziyo, awukwazi ukusiza ...
Umhlahlandlela Wokuvikela Ubusika we-AHU
Amanzi asetshenziselwe ukupholisa nokushisa umoya kumakhoyili wokushintshanisa ukushisa okushubile cishe selokhu kwaqala ukufudumeza nomoya opholisayo. Ukuqandiswa koketshezi nokonakala kwekhoyili okuholele nakho bekukhona ngobude besikhathi obufanayo. Kuyinkinga ehlelekile ...
Umehluko Phakathi Kokuhlanzeka Kokucindezela Okuhle Nokubi
Kusukela ngo-2007, i-Airwoods inikezelwe ukuhlinzeka ngezixazululo eziphelele ze-hvac ezimbonini ezahlukahlukene. Siphinde sinikeze isixazululo segumbi elihlanzekile lobuchwepheshe. Nabaqambi bendlu, onjiniyela besikhathi esigcwele nabaphathi bephrojekthi abazinikele, i-experiment yethu ...
Okubalulekile kwe-FFU ne-System Design
Yini iFan Filter Unit? Iyunithi lokuhluza abalandeli noma i-FFU ibalulekile i-laminar flow diffuser enefeni ehlanganisiwe nemoto. I-fan kanye ne-motor zikhona ukunqoba ingcindezi emile yesihlungi se-HEPA noma i-ULPA esifakwe ngaphakathi. Lokhu kuyasiza ...
Imboni yezokudla izuza kanjani ngezindlu ezihlanzekile?
Impilo nenhlalakahle yezigidi zixhomeke kubakhiqizi nakumaphakethe amandla wokugcina indawo ephephile futhi engenabungozi ngesikhathi sokukhiqiza. Kungakho ochwepheshe kulo mkhakha babanjwa kumazinga aqinile kakhulu kune ...
I-Airwoods HVAC: Umbukiso Wamaphrojekthi waseMongolia
I-Airwoods ifeze ngempumelelo amaphrojekthi angaphezu kwama-30 eMongolia. Kubandakanya isitolo soMnyango WeNomin State, iTuguldur Shopping Centre, iHobby International School, iSky Garden Residence nokuningi. Sizinikezele ocwaningweni nakwezobuchwepheshe ...
Ilayisha Iziqukathi Zephrojekthi ye-PCR ye-Bangladesh
Ukupakisha nokulayisha kahle isitsha kuyisihluthulelo sokwenza ukuthunyelwa kube sesimweni esihle lapho amakhasimende ethu ethola ngakolunye uhlangothi. Kulezi zinhlelo zokuhlanza zaseBangladesh, umphathi wethu wephrojekthi uJonny Shi wasala esizeni ukuze aqondise futhi asize yonke inqubo yokulayisha. Yena ...
8 Kumele Ugweme Amaphutha Wokufaka Umoya Wokuhlanza I-Cleanroom
Uhlelo lokungenisa umoya kungenye yezinto ezibalulekile ekwakhiweni nasekusetshenzisweni kwenqubo ye-Cleanroom. Inqubo yokufakwa kwesistimu inomthelela oqondile emvelweni waselebhu kanye nasekusebenzeni nasekuhlinzekweni kwemishini yokuhlanza. Okweqile ...
Imibuzo Ebuzwa Njalo Yama-PCR Labs (Ingxenye B)
Okwamanje iningi lezivivinyo zamanje zeCovid-19 ezivela kuyo yonke imibiko zisebenzisa i-PCR. Ukwanda okukhulu kokuhlolwa kwe-PCR okwenza ilebhu ye-PCR kube yisihloko esishisayo embonini yezindlu zokuhlanza. E-Airwoods, siphinde siqaphele ukwanda okuphawulekayo kwe-PCR lab inq ...
Imibuzo Ebuzwa Njalo Yama-PCR Labs (Ingxenye A)
Uma ukwenza umuthi wokugoma kungumdlalo omude wokulwa ne-coronavirus yenoveli, ukuhlolwa okusebenzayo kungumdlalo omfushane njengoba odokotela nezikhulu zezempilo zomphakathi befuna ukucindezela ukuqhuma kwezifo. Ngezingxenye ezahlukahlukene zezwe zivula izitolo kanye ...
Yiziphi izinto ezibalulekile zokwakhiwa kwegumbi lokuhlanza?
Izindlu zokuhlanza zisetshenziswa cishe kuyo yonke imboni lapho izinhlayiya ezincane zingaphazamisa inqubo yokukhiqiza. Ngokuthuthuka okusheshayo komnotho wezenhlalo, ikakhulukazi ucwaningo lwesayensi nokukhiqizwa kobuchwepheshe obuphezulu ...
Ungayilayisha kanjani imikhiqizo yokuhlanza esitsheni sezimpahla
KwakunguJulayi, iklayenti lathumela inkontileka kithi, ukuthenga amaphaneli namaphrofayli e-aluminium ehhovisi labo elizayo namaphrojekthi egumbi lokuqandisa. Ehhovisi, bakhethe ipaneli yesangweji lesingilazi le-magnesium, elinobukhulu obungu-50mm. Okwenziwe kungabizi kakhulu, umlilo ...
Imicimbi ye-2020-2021 HVAC
Imicimbi ye-HVAC yenziwa ezindaweni ezahlukahlukene emhlabeni wonke ukukhuthaza imihlangano yabathengisi namakhasimende kanye nokukhombisa ubuchwepheshe bamuva emkhakheni wokushisa, ukungena komoya, umoya opholisayo kanye nefriji. Umcimbi omkhulu wokubheka ...
I-Dos ne-Dont yokuhlolwa kwamangqamuzana
Izindlela zokutholwa kwamangqamuzana zinekhono lokukhiqiza ivolumu enkulu ye-nucleic acid ngokukhulisa inani lokulandela okutholakala kumasampula. Yize lokhu kuzuzisa ukunika amandla ukutholwa okuzwelayo, kuphinde kwethule ...
Amathiphu Wokuklama Uhlelo lwe-HVAC Office
Ngenxa yobhadane emhlabeni jikelele, abantu banakekela ngokwengeziwe ngokwakha ikhwalithi yomoya. Umoya omusha nezempilo unganciphisa ubungozi bokuthola izifo nokungcola kwegciwane ngezikhathi eziningi zomphakathi. Ukuze sikusize uqonde indawo enhle yomoya omusha ...
Ososayensi Bancenga I-WHO ukuthi Ibuyekeze Isixhumanisi Esiphakathi Komswakama Nempilo Yokuphefumula
Isicelo esisha sibiza i-World Health Organisation (i-WHO) ukuthi ithathe izinyathelo ezisheshayo nezinqunyiwe zokusungula umhlahlandlela womhlaba wonke ngekhwalithi yomoya yasendlini, ngesincomo esicacile mayelana nomkhawulo omncane ophansi womswakama womoya ezakhiweni zomphakathi. Lesi sinyathelo esibucayi sizonciphisa ...
I-China Ithumele Ochwepheshe Bezokwelapha e-Ethiopia ukuyolwa ne-Coronavirus
Ithimba labachwepheshe bezokwelapha baseChina eliqeda ubhadane namhlanje lifike e-Addis Ababa ukuzokwabelana ngolwazi nokusekela imizamo ye-Ethiopia yokunqanda ukusabalala kwe-COVID-19. Leli thimba lamukela ochwepheshe bezokwelapha abangu-12 abazohlanganyela ekulweni nokusabalala kwe-coronavirus amasonto amabili ...
Idizayini yokuhlanza ngezinyathelo ezilula eziyishumi
"Kulula" kungenzeka kungabi yigama elifika engqondweni yokuklama izindawo ezibucayi kangaka. Kodwa-ke, lokho akusho ukuthi awukwazi ukukhiqiza idizayini yokuhlanza eqinile ngokubhekana nezinkinga ngokulandelana okunengqondo. Le ndatshana ihlanganisa isinyathelo ngasinye esisemqoka, kuye ezinsizeni eziqondene nohlelo ...
Ungayimaketha Kanjani i-HVAC Ngesikhathi Sobhadane Lwe-Coronavirus
Ukuthumela imiyalezo kufanele kugxile kuzinyathelo zezempilo, kugweme ukuthembisa ngokweqile Faka ukumaketha ohlwini lwezinqumo zebhizinisi ezijwayelekile ezikhula zibe nzima kakhulu njengoba inani lamacala we-coronavirus landa futhi ukusabela kukhula kakhulu. Osonkontileka kudingeka banqume ukuthi kungakanani ...
Amakhasimende aqondisayo ngekhwalithi yomoya yasendlini kanye namathiphu wokugcina i-IAQ
Ngaphezulu kunanini ngaphambili, amakhasimende akhathalela ikhwalithi yomoya wabo Ngezifo zokuphefumula ezibusa izihloko zezindaba nabantu abaphethwe yisifuba somoya nokungezwani nezinto ezithile, ikhwalithi yomoya esiwuphefumulayo emakhaya ethu nasezindlini ezingaphakathi ayikaze ibaluleke kakhulu kubathengi ...
Ngabe Ukhona Umkhiqizi Ongaba Umkhiqizi We-Mask Ohlinzwa?
Kungenzeka ukuthi umenzi ojwayelekile, njengefektri yezingubo, abe ngumakhi wemaski, kepha kunezinselelo eziningi okufanele zinqotshwe. Futhi akuyona inqubo yobusuku bonke, njengoba imikhiqizo kufanele ivunyelwe yimizimba eminingi nenhlangano ...
I-FAQ Yokwakhiwa Kwendawo Yokuhlanza
Kungani Kufanele Uthole Usizo Ekwakheni Igumbi Lokuhlanza? Ukwakhiwa kwendlu yokuhlanza, kufana nokwakha indawo entsha, kudinga inqwaba yabasebenzi, izingxenye, izinto zokwakha, kanye nokucatshangelwa kokuklanywa. Izakhi zokuhlwaya nokwengamela ukwakhiwa kwesakhiwo esisha akuyona into ozoyithatha ...
Isidingo Sokuphefumula Kwezakhiwo Zanamuhla
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe bomoya. Abantu bayakwazi ukulawula imvelo yangaphakathi esakhiweni futhi bakhe isimo sezulu esintofontofo sasendlini. Kodwa-ke, esimweni sokushoda komhlaba wonke kwe ...
I-Airwoods iboniswe ngempumelelo ku-2020 BUILDEXPO
I-3 BUILDEXPO ibibanjwe mhlaka 24 - 26 kuNhlolanja 2020 eMillennium Hall Addis Ababa, e-Ethiopia. Kwakuyindawo eyodwa yokuthola imikhiqizo emisha, izinsizakalo nobuchwepheshe obuvela emhlabeni wonke. Amanxusa, izithunywa zezohwebo kanye nabamele abavela ...
Uyemukelwa e-AIRWOODS Booth kwa-BUILDEXPO 2020
I-Airwoods izoba se-BUILDEXPO yesithathu kusuka ngomhlaka-24 kuya ku-26 kuNhlolanja (ngoMsombuluko, ngoLwesibili, ngoLwesithathu), ngo-2020 eStand No. 125A, eMillennium Hall Addis Ababa, e-Ethiopia. Esitendeni esinguNo.125A, akukho mater ongumnikazi, usonkontileka noma umxhumanisi, ungathola imishini ye-HVAC elungiselelwe ne-cleanroom s ...
Izinkinga ezi-4 ezijwayelekile ze-HVAC nokuthi Ungazilungisa Kanjani
ngomphathi ku 20-01-17
Izinkinga ekusebenzeni komshini wakho zingaholela ekusebenzeni okunciphisiwe nasekusebenzeni kahle futhi, uma kushiywe kungatholakali isikhathi eside kakhulu, kungadala nezinkinga zezempilo. Ezimweni eziningi, izimbangela zalokhu kungasebenzi kahle ziyizinkinga ezilula. Kepha kulabo abangaqeqeshiwe ku-HVAC ...
Isebenza kanjani i-Chiller, Cooling Tower kanye ne-Air Handling Unit
Isebenzisana kanjani i-Chiller, i-Cooling Tower ne-Air Handling Unit ukuhlinzeka nge-air conditioning (i-HVAC) esakhiweni. Kulesi sihloko sizobe sibheka lesi sihloko ukuqonda izisekelo zesitshalo esiphakathi se-HVAC. Yeka ukuthi umbhoshongo opholisa chiller no-AHU basebenza kanjani ndawonye Uhlelo oluyinhloko lwekhompiyutha ...
Ukuqonda Ukubuyiswa Kwamandla KumaRotary Heat Exchangers
Izakhi zobuchwepheshe ezisemqoka ezithinta ukusebenza kahle kwamandla Ukuqonda ukuvuselelwa kwamandla kuzishintshisi zokushisa ezishintshayo- Izakhi ezibalulekile zezobuchwepheshe ezithinta ukusebenza kahle kwamandla Amasistimu wokutakula ukushisa angahlukaniswa ngezigaba ezimbili ngokuya ngemingcele eshisayo yohlelo: Izinhlelo zokubuyisa amandla ...
I-AHRI Ikhishwa ngo-Agasti 2019 Idatha Yokuhambisa Imishini Yokushisa Nokubandisa
Ama-Heater Storage Water Heater athunyelwe e-heater amanzi e-gesi okugcinwa kuwo izindlu ngo-Septhemba 2019 enyuka ngo-Septhemba 2019, kwenyuka amaphesenti angu-7, aya kuma-330,910 amayunithi, asuka kumayunithi angama-328,712 athunyelwe ngoSepthemba 2018. Ukuthunyelwa kwamanzi okugcina ugesi kagesi kunyuke ngo-3.3% ngoSepthemba 2019 kuya ku-323, .. .
Izinkontileka zakwa-Airwoods ne-Ethiopian Airlines Room Room Project
NgoJuni 18th 2019, iAirwoods isayine Isivumelwano neEthiopian Airlines Group, ukwenza isivumelwano se-ISO-8 Clean Room Construction Project yeAircraft Oxygen Bottle Overhaul Workshop. I-Airwoods isungula ubudlelwano bokusebenzisana ne-Ethiopian Airlines, ifakazela ngokugcwele ukuthi i-Airwoods 'iyasebenza futhi iyaqonda ...
Imakethe ye-Cleanroom Technology - Ukukhula, Amathrendi, ne-Forecast (2019 - 2024) Ukubuka konke kwemakethe
Imakethe yezobuchwepheshe be-cleanroom yalinganiselwa kuma-USD 3.68 billion ngonyaka we-2018 futhi kulindeleke ukuthi ifinyelele kunani le-USD 4.8 billion ngo-2024, ku-CAGR ka-5.1% esikhathini sokubikezela (2019-2024). Kube nesidingo esikhulayo semikhiqizo eqinisekisiwe. Izitifiketi ezahlukahlukene zekhwalithi, njenge-ISO chec ...
Igumbi Elihlanzekile - Ukucatshangelwa Kwezempilo Nokuphepha kwe-Cleanroom
Ukumiswa Komhlaba Wonke Kuqinisa Imboni Yamakamelo Ahlanzekile Yesimanje Izinga lamazwe omhlaba, i-ISO 14644, lihlanganisa ubuchwepheshe obuningi bezindlu zokuhlanza futhi ligcina ubuqiniso emazweni amaningi. Ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-cleanroom kusiza ukulawulwa kokungcoliswa okuvela emoyeni kepha futhi kungathatha enye into ...
Inkambu ye-HVAC Ishintsha kanjani
ngomphathi ku 19-04-18
Isimo senkambu ye-HVAC siyashintsha. Lowo ngumbono obusobala kakhulu kwi-2019 AHR Expo kulo Januwari owedlule e-Atlanta, futhi usazwakala futhi ezinyangeni ezithile kamuva. Abaphathi bezindawo kusadingeka baqonde ukuthi yini ngempela eguqukayo-nokuthi bangaqhubeka kanjani nokuqinisekisa ukuthi bakha ...
Imihlahlandlela Yokuhambisana Ka-2018 – Izinga Elikhulu Kakhulu Longa Amandla Emlandweni
ngomphathi ku 19-04-17
Imihlahlandlela emisha yokulandela imigomo yoMnyango Wezamandla waseMelika (i-DOE), echazwe “njengezinga elikhulu kakhulu lokonga ugesi emlandweni,” izothinta ngokusemthethweni imboni yokushisa nokupholisa kwezohwebo. Amazinga amasha, amenyezelwa ngo-2015, ahlelelwe ukuthi aqale ukusebenza ngoJanuwari 1, 2018 futhi azoshintsha ...
Ukwakhiwa kwe-Airwoods HVAC Oversea Department New Office
ngomphathi ku 19-03-17
Ihhovisi elisha le-Airwoods HVAC liyakhiwa eGuangzhou Tiana Technology Park. Indawo yokwakha icishe ibe yi-1000 metre skwele, kufaka phakathi ihholo lehhovisi, amakamelo okuhlangana amathathu anosayizi omncane, ophakathi naphakathi, ihhovisi lemenenja jikelele, ihhovisi lezokubala imali, ihhovisi lemenenja, igumbi lokuqina ...
Imakethe ye-HVAC yokuthinta ama-Rs 20,000 Crore Mark nge-FY16
ngomphathi ku 19-02-20
I-MUMBAI: Imakethe yaseNdiya yokushisa, yokungenisa umoya kanye neyomoya (HVAC) kulindeleke ukuthi ikhule ngamaphesenti angama-30 kuye ngaphezulu kwama-Rs 20,000 eminyakeni emibili ezayo, ikakhulukazi ngenxa yokwanda komsebenzi wokwakha kwingqalasizinda nasemikhakheni yezezakhiwo. Umkhakha we-HVAC ukhule waba ngaphezu kwe-Rs 10,000 cro ...
Sinakekela Igumbi Lakho Elihlanzekile, Umhlinzeki Wezixazululo wegumbi elihlanzekile
ngomphathi ku 19-02-14
Hlonipha ikamelo elihlanzekile lekhasimende lokwakhiwa kwangaphakathi isigaba sesithathu - Ukuhlolwa kweCargo nokuthunyelwa ngaphambi kweholide le-CNY. Iphaneli kufanele lihlolwe ikhwalithi, futhi lisulwe ngamunye ngamunye ngaphambi kokunqwabelana. Iphaneli ngayinye imakwe ukuhlolwa okulula; kanye nokunqwabelaniswa okuhlelekile. Ukubheka ubuningi, nohlu lwemininingwane ...
I-Airwoods Ithole Umklomelo Wokuthengisa Okungenzeka Kakhulu Kakhulu
Ingqungquthela ye-2019 Gree Central Air Conditioning New Products Conference kanye noMkhosi Wonyaka Wokuklomelisa Abathengisi wabanjwa ngoDisemba 5th, 2018 ngendikimba yeGree Innovation Technology, I-Artificial Intelligence Future. Abakwa-Airwoods, njengomthengisi wamaGree, babambe iqhaza kulo mcimbi futhi bahlonishwa ...
I-Global Air Handling Unit (AHU) Market 2018 ngabakhiqizi, izifunda, uhlobo nokusetshenziswa, Isibikezelo kuya ku-2023
I-Global Air Handling Unit (AHU) Market ichaza imininingwane ephelele emboza incazelo yomkhiqizo, uhlobo lomkhiqizo, izinkampani ezisemqoka nokusetshenziswa. Lo mbiko uhlanganisa imininingwane ebalulekile ehlukaniswe ngokususelwa esifundeni sokukhiqiza sokuphatha umoya (ahu), abadlali abakhulu, nohlobo lomkhiqizo oluzokwenza ...
I-HVAC R Expo ye-BIG 5 Exhibition Dubai
Uyemukelwa Ekuvakasheleni Idokodo Lethu e-HVAC R Expo ye-BIG 5 Exhibition Dubai Ufuna imikhiqizo yomoya yamuva nemikhiqizo yokungenisa umoya ukuze ivumelane namaphrojekthi wakho? Woza uzohlangana ne-AIRWOODS & HOLTOP eHVAC & R Expo ye-BIG5 Exhibition, eDubai. Idokodo NO.Z4E138; Isikhathi: 26 kuya ku-29 Novemba, 2018; A ...
Ukwelashwa kwama-Vocs - Kwaziwa njengebhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu
I-Airwoods - I-HOLTOP Pioneer Yokuvikelwa Kwezemvelo ekuvikelweni kwemvelo komkhakha we-lithium battery separator Airwoods - iBeijing Holtop Environmental Protection Technology Co, Ltd. isitifiketi njengebhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu. Kubandakanya emkhakheni wokuvikelwa kwemvelo kanye nezinsizakusebenza ...
I-HVAC Product Certification CRAA Inikezwe i-HOLTOP AHU
Isitifiketi Somkhiqizo se-CRAA, i-HVAC Sanikezwa Uhlobo Lwe-Compact AHU Air Handling Unit. Ikhishwe yinhlangano yezimboni zasefrijini neyomoya opholisa iChina ngokuhlola okuqinile kwikhwalithi yomkhiqizo nokusebenza kwayo. Ukuqinisekiswa kwe-CRAA kuwukuhlola okunenhloso, okulungile futhi okugunyazayo
Izinkampani ze-HVAC China Refrigeration HVAC & R Fair CRH2018
Umbukiso wama-29 we-China Refrigeration Fair wawubanjelwe eBeijing ngo-Ephreli 9 kuya ku-11, 2018. Izinkampani ze-Airwoods HVAC zazihambele lo mbukiso ngombukiso wemikhiqizo yokungenisa umoya yokuvuselela amandla e-ErP2018 entsha, uhlobo olusha lwentuthuko engenawo umoya yohlobo lokungenisa umoya, amayunithi okuphatha umoya. ..
Isixazululo Sezinhlelo ze-Airwoods HVAC Lungiselela Induduzo Yezinga Lomoya Wangaphakathi
I-Airwoods ihlala izama ngakho konke okusemandleni ukunikela ngesixazululo se-HVAC sokulawula izindawo zasendlini zokunethezeka. Izinga lomoya wasendlini liyinkinga ebalulekile ukuthi ukunakekelwa kwabantu. Imvelo yasendlini inobuthi obuphindwe kabili kuya kahlanu kunobuthi kunemvelo engaphandle, ngokusho kwe-US Environmental Protect ...
Imikhiqizo ye-HVAC Products Showroom yasungulwa
Izindaba Ezinhle! NgoJulayi 2017, igumbi lethu lokubukisa elisha lasungulwa lavulelwa umphakathi. Kukhona okubonisa imikhiqizo ye-HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning): i-air conditioning yezentengiselwano, i-air conditioning yezimboni emaphakathi, umoya wokushintshanisa amapuleti womoya, isondo lokushisa elijikelezayo, imiphimbo yokuvikela imvelo ...